Airlinesgbọ elu Ethiopian Airlines na-agbanwe na Airbus mgbe ihe ọghọm Boeing 737 MAX nwụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airlinesgbọ elu Ethiopian Airlines na-agbanwe na Airbus mgbe ihe ọghọm Boeing 737 MAX nwụrụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • investments • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ụgbọelu nke ụgbọelu Ethiopian Airlines Tewolde Gebre Mariam
Ụgbọ elu Etiopia a na-akọ na ngwụcha ngwụcha nke ijikọ $ 1.6 ijeri azụmahịa na nnukwu ụlọ ọrụ ikuku nke Europe Airbus maka izu 20 nke ụgbọelu ya dị warara A220.
Dabere na akụkọ, na-ezo aka CEO nke ụgbọ elu Tewolde Gebre Mariam, ụgbọelu ndị nwe obodo na-atụle ịzụta otu ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu Airbus.
Nke a abụghị nke mbụ ụgbọelu ụgbọelu kacha ibu n’Africa na-achọ ịzụta 100 oche Airbus A220s maka ụgbọ mmiri ya. Linegbọ elu ahụ nọ na-atụle ụgbọelu ndị Europe na afọ gara aga, agbanyeghị, o mechara kpebie ka ọ gafee Boeing 737 ugbo elu ezinụlọ.
“Ọ bụ ezigbo ụgbọ elu - anyị anọwo na-amụ ya ogologo oge,” ka ekwuru Tewolde na-ekwu banyere ụgbọ elu Airbus A220.
Emere nkwekọrịta ahụ ka agwụchaa na njedebe nke afọ. Ọ bụrụ na nkwekọrịta ahụ gafere, ọ ga-abụ usoro izizi ụgbọ elu ahụ kemgbe ọdịda nke Boeing 737 MAX na March.
Dabere na Tewolde, Ethiopian Airlines chere nsogbu ihu na-ebu nnukwu Boeing 737 MAX, n'ihi na ọ ga-akwụsị na njem nke abụọ na ụgbọ elu si Etiopia isi obodo Addis Ababa gaa obodo ndị gụnyere Windhoek na Namibia na isi obodo Botswana Gaborone maka ịgba mmanụ. Airbus A220s na-arụ ọrụ ga-ekwe ka ụgbọ elu na-enweghị ntụpọ na-enweghị nkwụsị ọzọ.
Kemgbe mgbe ụgbọ elu Boeing kacha ere ere 737 MAX kwụsịrị, mgbe ọgbaghara abụọ na-egbu egbu bidoro n'afọ a, uru nke Airbus na-arịwanye elu, ebe Boeing bipụtara na mbibi ọ bụla kwa ọnwa na July, na-agbakọ ọnụego nke nsogbu 737 MAX na ihe karịrị ijeri $ 8.